Kaddib Dhaawacii Jabniinka Luka Jovic, Zinedine Zidane Oo Xaalad Adag Gelaya & Halka Weeraryahan Ee Kaliya Ee Uu Haysto - Gool24.Net
Kaddib Dhaawacii Jabniinka Luka Jovic, Zinedine Zidane Oo Xaalad Adag Gelaya & Halka Weeraryahan Ee Kaliya Ee Uu Haysto
May 14, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Ciyaartoyda kooxda Real Madrid ayaa tababarka shaqsiga ah ku qaatay garoonka Valdebebas Arbacadii, waxaanay u ahayd maalintii saddexaad oo xidhiidh ah, halkaas oo Zinedine Zidane uu ku arkayo waxyaabo badan oo ka farxiya oo la xidhiidha muuqaalka duleed ee laacibiintiisa oo uu ka arkay in jidh ahaan ay isku ilaaliyeen muddadii ay karantiilka ku jireen.
Tababare Zidane ayaa waxa uu si gaar ah indhaha ugu dhuftay Eden Hazard oo hore loogu eedayn jiray inuu naaxay oo soo dhuubtay, jidhkiisuna u diyaarsan yahay inuu halgan u galo sidii uu iskugu muujin lahaa Real Madrid oo xili ciyaareed aan wanaagsanayn oo dhaawacyo aafeeyeen uu ku qaadanayo.
Hal arrin ayaa tababaraha ka nixisay oo uu madax-xanuun ka qaaday, waana in aanu haysanin ciyaartooyo uu u kala doorto afka hore ee weerarka.
Laacibka reer Serbia ee Luka Jovic ayaa usbuucan horraantiisii la ogaaday inuu ka jaban yahay laf ka mid ah lugtiisa, taasina ay keeni doonto in illaa saddex bilood uu garoomada ka maqnaado, iyadoo ay dadka qaarkoodna sheegayaan inay suurtogal tahay inuu qalliin maro.
Mariano Diaz oo marka horeba aan saamayn ku lahayn kooxda oo kaydka ku jiray xili ciyaareedka intiisa badan ayaa isaguna dhaawacan.
Labadan laacib ee weerarka ah ee aan taamka ahayn, waxay tababare Zinedine Zidane ku keeneen xaalad adag oo xulasho yaraan ah, waxaanu afka hore ku haystaa Karim Benzema oo kali ah.
Xiddiga reer France oo masuuliyadda dhalinta goolashu dusha ka fuushay markii uu Cristiano Ronaldo ka tegay xagaagii 2018, ayaa waxa uu hadda yahay laacibka kaliya ee lambarka 9 ah ee ay kooxdu haysato, taas oo Los Blancos ka hor istaagi karta damacooda ah inay Barcelona ka dhacsadaan horyaalka, maadaama haddii uu dhaawacmo aanu jirin ciyaartoy lagu beddelo.
Xili ciyaareedkii hore ee 2018/19 waxa uu Benzema dhaliyey 30 gool dhamaan tartamada, waana rikoodhkiisii labaad ee ugu fiicnaa ee sannad gudihii uu ka sameeyo Spain, laakiin xili ciyaareedkan socda ayaa ah mid uu ka hooseeyo heerkiisii sannadkii hore. 36 kulan oo uu saftay ayuu dhaliyey 19 gool dhamaan tartamada.
Sergio Ramos iyo Rodrygo ayaa si lama filaan ah ku noqday labada ciyaartoy ee kusoo xiga dhinaca gool-dhalinta Karim Benzema xili ciyaareedkan.
Walaaca ugu weyn ee Zidane haysa waxa uu yahay in xattaa haddii uu caafimaad qabo Benzema, aanu haysanin weeraryahan kale oo la isku hallayn karo oo nasin kara kulamada qaarkood.
Marco Asensio oo kasoo laabtay dhaawac muddo toban bilood ka badan uu u jiifay, Eden Hazard oo taam noqonaya, Vinicus Junior, Rodrygo iyo Gareth Bale oo aan kalsooni badan lagu qabin ayaa ah laacibiinta kaliya ee uu Zidane u dooran karo beddelka Benzema haddii ay dhibaato ku timaaddo, dhamaantoodna waxay yihiin kuwo aan waligood ka ciyaarin weerar toos ah oo dhalintooduna aanay fiicnayn.